PSG Oo David De Gea Ka Dhigaysa Goolhayaha Taariikhda Kubbada Cagta Ugu Mushaarka Badan Iyada Oo Waliba Si Xor Ah Ku Doonaysa. - Gool24.Net
PSG Oo David De Gea Ka Dhigaysa Goolhayaha Taariikhda Kubbada Cagta Ugu Mushaarka Badan Iyada Oo Waliba Si Xor Ah Ku Doonaysa.
November 25, 2018 Mahamoud Batalaale
Kooxda Paris St-Germain ayaa talaabo wayn sare ugu qaaday in ay si layaableh Man United ugala soo wareegto goolhaye David De Gea iyada oo waliba si xor ah oo bilaa lacag ah ku heli karta mid ka mid ah goolhayayaasha waqti xaadirkan aduunka ugu fiican, waxaana PSG caawinaya wakiilka heerka sare ah ee Jorge Mendes. Wargayska Daily Mail ayaa shaaciyay in PSG ay qorshaysatay qaabkii ay De Gea xor ugu heli lahayd.
Kooxda PSG ayaa doonaysa in ay David De Gea ka dhigto goolhayaha taariikhda kubbada cagta ugu mushaarka qaalisan iyada oo De Gea uu joojiyay wada xaajoodkii ay Man United ku doonaysay in ay ku xaliso mustaqbalkiisa waxayna hadda United u muuqataa mid si bilaash ah oo xor ah ku waayi karta xidiga kooxdeeda ugu fiicnaa shantii sanadood ee ugu danbaysay.
PSG ayaa diyaar u ah in ay David De Gea todobaadkii mushaar ahaan u siiso £300,000 kun oo gini waana lacag sanadkii ka badan 15 milyan gini taas oo De Gea ku qasbi karta in uu soo afjaro waqtigiisii fiicnaa ee uu Man United ku soo qaatay.
Inkasta oo ay Real Madrid wax walba u samaysay in ay Man United kala wareegto David De Gea, waxay Man United ku adkaysatay in ay kooxdeeda ku sii hayso laakiin heshiiskii uu De Gea saxiixay sanadkii 2015 kii markii uu fashilmay heshiiskii buuxay ee uu Real Madrid la gaadhay ayaa dhacaya dhamaadka xili ciyaareedkan.
Guud ahaan PSG ayaa David De Gea miiska u saaraysa mushaar 60 milyan gini ah muddo afar sano ah taas oo sabab buuxa u noqon karta in Man United ay si bilaa lacag ah dhamaadka xili ciyaareedkan ku waydo De Gea oo loo arko goolhayayaasha aduunka ugu fiican ee qiimo ahaan xataa ka sarayn karayay Alisson iyo Kepa oo lacago waali ah lagula soo wareegay.
In PSG ay samaysay qorshihii ay De Gea si xor ah ugu heli lahayd, waxay si wayn kooxda reer France uga caawin kartaa in kooxdeeda ay ku hesho goolhayihii ay waqtiga dheer doonaysay iyada oo waliba aan xataa wax dhibaato ah kala kulmi doonin sharciga dhaqaale wanaaga ee kooxdeeda dhibaatada ku ah.
Haddii ay PSG isla hesho David De Gea oo goolka ah, Neymar JR iyo Kylian Mbppe oo dhinaca kale ee garoonka ah, waxay muujinaysaa in ay dhisi doonto mashruuc kale oo ka xoog badan sida ay hadda tahay wuxuuna De Gea badali doonaa Gianluigi Buffon.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay PSG ku guulaysato saxiixa xorta ah ee De Gea ee dhamaadka xili ciyaareedkan, waxay dhibaato aad u wayn ku noqon doontaa Man United oo haddaba ku dhibtoonaysa Premier league.